Agaasimiha Filimka caan baxay ee Black Panther oo la xiray: – Voice of Somalis In Exile
(WAR)-Khamiis-10/03/2022-Agaasimaha filimka laga daba-dhacay ee Black Panther Ryan Coogler, ayaa la xiray ka dib markii markii gabar khasnaji ka ah Bangi ay ku qaladay qof bangiga inuu dhaco u dan leh.
Isfaham’waa iyo si qaldan wax-u-qaadasho ayaa gabadha lacag hayaha ah ku xambaartay, in eey booliska iyo ilaalada bangiga hoosta fariin uga dirsato, iyadoo u sheegtay in toban kun oo doollar lacag ka badan uu nin doonayo in uu bandhigga kala baxo, ninkaasna waa Ryan Coogler oo lacagtiisa u doontay bangiga.
Mr Coogler ayaa markii uu dhacdadaan la kulmaayey u dhiibay lacag-heysaha bangiga Atlanta, jeeg ay u qoran tahay laba iyo toban kun oo doollar, una sheegay in uu doonayo in lacagta uu si aan la wada arkeynin aayar u tirsado.
Gabadhii baa markeey halkaas joogto, si qaldan u fasiratay hadalka Ryan, deetana booliska u yeeratay, maadaama lacagtu ka badan tahay toban kun oo doollar, sidaasna ay waajib ku tahay in la baaro qofka doonaya lacagta intaas la eg in uu mar qur ah la baxo.
Sarkaalka ku soo horeeyey goobta oo isagu xirnaa camerooyinka dharka lagu dhajiyo ayaa sheegay in codka gabadha ciidan-wacatay, uu u ekaa mid dhiillo sita, sadaasna ay qaadeen tallaabadii ku habooneyd oo durba katiina ku jabiyeen, agaasime Rayan Coogler.
Dadka Madoow ee Mareykanka ayaa alaaba dhibaato ku qaba in la isaga qaldo dad sha’ni maagan, waxeyna noqdeen dhibaato u joog, taasina waxaa ugu wacan sida ay ku doodaan qolyaha cunsiriyada la daggaalama, in midabkooda madoow darteey shar-wadayaal loo niyeeysto.
Ryan Coogler ayaa agaasime ka noqday filim aan noociisa la arag oo dadka jilaya oo dhami ahaayeen dad madoow, ayaa waxaa ka soo xerooday markii la soo bandhigay muddo gaaban gudahood, 1.344 Billion oo doollarka Mareykanka ah, waxaana filimku ku guuleystay abaalmarino caalami ah oo fara badan, halka uu sare u qaaday, kalsoonida jilayaasha, filim-sameeyayaasha iyo agaasimayaasha filimada ee madoow.